एक गाग्री पानीका लागि हप्तामा पालो ! – News Bank Nepal Your News Bank
एक गाग्री पानीका लागि हप्तामा पालो !
Bhim Thapa Latest Update , News/समाचार , June 2nd, 2019
पाल्पा, १९ जेठ। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–३ भुवनपोखरीको गोखुङ्गा पँधेरामा स्थानीयवासीले एक गाग्रीको पानीका लागि हप्तामा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सुख्खा मौसम र गर्मी बढेपछि खानेपानीका मुहान सुकेर यहाँका स्थानीय बासिन्दाले हप्तामा एक घरले एक गाग्री खानेपानी पाउने गरेको स्थानीय बासिन्दा तथा वडा सदस्य रमा नेपालीले बताउनुभयो ।
पश्चिम पाल्पाको भुवनपोखरीको गोखुङ्गामा ६० घर दलित बस्ती छ । दलित बस्तीले उपभोग गर्ने खानेपानीको मुहान एउटा मात्र रहेको छ । वर्षात्को पानी सङ्कलनका लागि सबैका घरमा घैँटा छन् । तर, यसपालिका घैँटाका पानी माघ÷फागुनमा सकिएपछि खानेपानीको पिरलोमा स्थानीय दिनरात कटाउन बाध्य छन् ।
यसपटक प्रशस्त वर्षात् हुन नसकेकाले आकाशेपानी सकिएपछि यहाँका दलित समुदायमा पानीका लागि मुहानको खोजीमा दिनभर खर्चिन बाध्य हुनुपरेको गुनासो उनीहरुको छ । रैनादेवी छहरा गाउँ कार्यापालिका सदस्य तथा स्थानीय बासिन्दा गोपाल परियारका अनुसार पानी समस्या बढेपछि दिनरात पानीको मुहानमा बिताउनु परेको छ ।
हप्तामा एक गाग्री पानीले परिवारका लागि अपुग हुने भएपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दा तीन घण्टा लगाएर एक गाग्री पानी बोकेर ल्याउन बाध्य बनेका छन् । बिहान ५ बजे पानी ल्याउनका लागि हिँडेका पधेरीहरु ८ बजेतिर घरमा पाइला टेक्छन् ।
महरा याैन दुर्व्यवहार प्रकरण: फरेन्सिक जाँचकाे तयारी
यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुख महराले दिए राजीनामा
दशैंमा स्वास्थ्य संस्था बन्द नहुँने
दशैंकाे पहिलाे दिन घटस्थापना
हराएका मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता
म्यान्मारमा भूकम्पबाट मन्दिर र विद्यालयमा क्षति
जर्जियाका प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा